8 zviratidzo zvekuzvimba muurethra. – Noor Health Life
8 zviratidzo zvekuzvimba muurethra.
Kuzvimba kweurozi chirwere chinorwadza zvikuru icho vanhu vazhinji vanozeza kutaura nezvacho.
Asi waiziva here kuti zviratidzo zvekuzvimba uku kana UTI zviri pachena uye kazhinji zvinogona kuzivikanwa kunyangwe chirwere chisati chatanga?
Noor Hutano Hupenyu hunoti zviratidzo zvekuzvimba uku zviri pachena asi vanhu vazhinji vanozvifuratira.
Zvisinei, kana uchida kuongorora urinary turakiti chirwere, unofanira kuyeuka zviratidzo izvi.
Kuzvimba kweurethra kuri nyore kudzivirira
Kusvira kuita weti nguva dzese
Ichi chiratidzo cheUTI chaunonzwa uchida kuita weti nguva dzese, kunyangwe uchangopinda muwashroom, unogona kunzwa emergency panyaya iyi kureva kuti enda nekukasika.
Kuita weti kushoma
Kana uchienda kunowacha, kashoma kuita weti, unonzwa sekuti unofanira kuita zvakawanda asi haugone kuzviita zvisinei nekuedza kwako kana kuti haugutsikane.
Kuenda kunzvimbo yekugezera panguva yechirwere ichi kunogona kuita kuti unzwe kutsamwa, unogona kunzwa kuti basa iri rinorwadza zvikuru, kuwedzera panogona kunge kune marwadzo, mumatambudziko acho maviri chiratidzo chechirwere.
UTIs inowanzokonzera ropa muweti, asi kwete mumunhu wese, sezvo inogona kuve yakasviba kuona.
Weti inonhuwa yakashata zvakanyanya nekuda kwemhando ipi neipi yechirwere chedundira.Kana ukasangana nezviratidzo zviri pamusoro apa uine mweya wekufema, inogona kunge iri UTI.Remedza unoongororwa zvinoenderana nemirairo yake.
Zvinowanzokonzera Urinary Tract Inflammation
Ruvara rweweti runogona kutaura zvakawanda, kusanganisira chirwere cheurinary tract. Kana ruvara urwu rwuri chimwe chinhu kunze kweyero kana pachena, chiratidzo chekunetseka. Tsvuku kana shava chiratidzo chechirwere, asi tanga watarisa kuti hauna kudya chero chikafu chine pink, orenji kana chitsvuku muruvara.
Kuzvimba kweurinary tract kunokonzerwa neutachiona hwedundira.Chero zvazvingava, semugumisiro wehutachiona, kana muviri ukaona kuti pane chimwe chinhu, unotanga kuzvimba.Nematanho ekudzivirira, masero eropa iwayo machena Anosiya, zvichiita kuti munhu anzwe kuneta.
Kupisa, pakati pezvimwe zviratidzo, kazhinji kunoratidza kuwedzera kwekuoma kwekuzvimba muurinary tract uye kupararira kwehutachiona kune itsvo. Kana uine fivha inodarika 101 Fahrenheit kana kunzwa kutonhora kana kuti muviri wako uchinyura nedikita paunenge wakarara usiku, unofanira kutsvaga rubatsiro rwekuchipatara nekukasika.
Kuzvimba urethra chirwere chinorwadza uye vanhu vazhinji vanozeza kutaura nezvazvo.
Panewo njodzi yekutapukirwa neitsvo nekuda kwechirwere ichi kana kuzvimba uye zviratidzo zvaro zvinowanzoitika mukutsva zvakanyanya uye kurwadziwa muweti, ukuwo kuda kuita weti, kushanduka ruvara.Uye panogona kunge paine fivha, inokwira in serious cases.
Kubuda ropa uye weti inonhuwa zviratidzo zvakare.
Kana ikasarapwa kana kuti isina kuongororwa, chirwere ichi chinogona kupararira kubva dundira kuenda kuitsvo uye kukonzera kuzvimba kweitsvo, izvo zvinogona kuuraya.
Nenzira, pane zvimwe zvikonzero zvakaoma kudzora, sekuchembera, vakadzi vari panjodzi kupfuura varume, pamuviri, itsvo matombo, chirwere cheshuga uye chirwere cheAlzheimer, nezvimwewo.
Asi kunewo mamwe mararamiro emararamiro anowedzera njodzi yechirwere.
Usave nehanya nekuchena
Muchokwadi, hutsanana husina kunaka hunogona kukonzera kuwedzera kwenhamba yeaya mabhakitiriya, izvo zvinowedzera njodzi yekuzvimba kweurinary turakiti.
Inwa mvura shoma
Ongororo yakaitwa naNoor Health Life yakawana kuti tsika yekunwa mvura yakawanda inoderedza njodzi yekuzvimba weti, kunyanya kuvakadzi. Maererano netsvakurudzo, nzira iri nyore uye yakachengeteka yekudzivirira chirwere chinorwadza ichi kudzivirira utachiona uye kunwa litre imwe chete yemvura kupfuura nguva dzose kunobatsira kudzivirira chirwere ichi. Maererano netsvakiridzo, vanhukadzi vane njodzi huru yechirwere ichi kupfuura varume, asi varume vanofanirawo kutora chenjedzo iyi. Vati kunwa mvura yakawanda kunoita kuti zvive nyore kubvisa utachiona hunenge hwaungana mudundira uye husawanda izvo zvinokonzera chirwere ichi.
Shandisa zvipfeko zvakasimba
Kugara uchishandiswa kwembatya dzakasimba kunogona kutungamirira kuzvirwere zvinorwadza zvakadai sokuzvimba kana kutapukirwa kweurinary tract.Kushandiswa kwembatya kunowedzera ngozi yekuputika kweurethra.
Nekuda kwerimwe basa ringave rakachipa kana chikonzero,mumwe nemumwe wedu munhu anorega kuita weti uye hazvina kuipa asi kunze kwekunge tatanga kuita zvakanyanya kana kupinda mutsika.Make up Kana tsika yakadaro ikaumbwa, inogona kutungamirira kuzvinetso zvakakomba zvikuru. Kuita izvi kunowedzera kukura kwemabhakitiriya anokuvadza, izvo zvinowedzera njodzi yekuzvimba kweurinary turakiti.
Pane mbiriso yakakosha (VCUG) yekuyera kudzvanywa mukati medundira neurethra panguva yeweti iyo inoratidza kushandisa x-rays zvinoitika kana mwana wako aita weti.
Urinary system (yemukadzi)
VCUG inomirira “widening cysto-retrogram”) zvinoreva kuita weti. “Cysto” ndeyedundira. “Urethro” ndeye urethra, chubhu inobvisa weti kubva mudundira. “Gramu” zvinoreva mufananidzo. Naizvozvo, VCUG mufananidzo weurinary excretion kubva dundira kuburikidza neurethra.
Muedzo unoshandisa imwe mhando yemwando inonzi musiyano wepakati kuratidza zviri nani weti muX-ray.
Ita kuti mwana wako agadzirire bvunzo
Tora nguva yekunyatsoverenga ruzivo urwu uye utsanangure kumwana wako. Vana vanoziva zvokutarisira havawanzozvidya mwoyo. Udza mwana wako nezvebvunzo nemashoko aanonzwisisa, pamwe chete nemashoko anoshandiswa nemhuri yako kuti anzwisise kuti muviri unoshanda sei.
Sechikamu chebvunzo, chubhu diki inonzi catheter ichaiswa muweti yemwana wako. Zvicharwadza kupinza catheter. Asi kana mwana wako akagara akadzikama, zvichava zvakasununguka kupfeka. Unogona kudzidzisa mwana wako kuti adzikame nekufema zvakanyanya. Kumbira mwana wako kuti akope makenduru ekuzvarwa, kufuridzira mabharumu kana kuburitsa mabhuru. Ita basa rekufema iri kumba usati wauya kuchipatara.
Vachiri kuyaruka dzimwe nguva vanounza chimwe chinhu chakasununguka chekubata panguva yebvunzo. Mwana wako anogona kuuya netoyi yedonje kana gumbeze kubva kumba.
Mumwe wevabereki anogona kuva nemwana chero nguva panguva yebvunzo. Kana uine pamuviri, unogona kugara muimba yacho kusvikira catheter yaiswa. Asi unofanira kubva mukamuri panguva yeX-ray yemwana.
Unofanira kuudza mwana wako kuti chiremba kana tekinoroji anogona kubata nhengo dzake dzakavandika kuti adzichenese uye kuisa machubhu mairi. Udza mwana wako kuti wamubvumira kubata nekuti bvunzo ichabatsira.
Maedzo acho achaitwa nenyanzvi mbiri dzehunyanzvi
Tekinoroji inyanzvi mune catheter implants uye X-rays. Dzimwe nguva radiologist inofanira kunge iri mukamuri panguva yekuedzwa. Iyo radiologist inoverenga X-rays.
Urinary system (murume)
Iyo X-ray tekinoroji ichagadzirira mwana wako bvunzo kuburikidza nekumuudza zvichaitika panguva iyoyo. Iyo radiologist ichachenesa nzvimbo iyo nhengo yemwana wako kana urethra inoenda. Iyo tekinoroji inozoisa iyo inochinjika chubhu munzvimbo yakashama. Catheter ichubhu refu, nhete, yakapfava, inotsvedzerera inopfuura nemuurethra ichipinda mudundira. Tekinoroji vanotsanangura izvi nguva dzese, sezvavanoita.
Kana mwana wako ane chirwere chemwoyo
Mwana wako angada kunwa mishonga inorwisa mabhakitiriya asati aongororwa. Somuenzaniso, vana vane chirwere chemwoyo vanofanira kunwa mishonga inorwisa mabhakitiriya vasati vaenda kuna chiremba wemazino. Mushonga unorwisa mabhakitiriya mushonga unouraya utachiona. Kana mwana wako achida mushonga uyu, ndapota udza chiremba ari kunyora VCUG kumwana wako. Chiremba achawana mushonga uyu asati apa mwana wako VCUG.
VCUGs inowanzoitwa muchipatara
Kudzvinyirirwa mukati medundira uye urethra panguva yekudonha kunoonekwa neDhipatimendi reDiagnostic Imaging. Inowanzonzi dhipatimendi reX-ray. Kana iwe usingazivi nzvimbo yedhipatimendi iri, tsvaga kubva pakutambira kukuru.
Kuongorora uku kunotora maminitsi makumi maviri kusvika makumi matatu. Mushure mekuedzwa iwe uchafanirwa kugara munzvimbo ino kweanenge maminetsi gumi nemashanu kusvika mifananidzo yagadzirira.
Paunopinda muDhipatimendi reDiagnostic Imaging, mwana wako achaiswa muimba imwe chete yokuchinja, akapfeka gauni rechipatara. Mwana wako anobva aendeswa kukamuri yeX-ray. Mubereki mumwe chete ndiye achakwanisa kuenda nemwana.
Kana iwe nemwana wako mava mukamuri yeX-ray, tekinoroji achakukumbira kuti ubvise chipfeko chemukati chemwana wako. Ipapo mwana wako acharara pasi patafura yeX-ray. Bhandi rekudzivirira rinogona kuiswa padumbu kana pamakumbo emwana wako kuti uve nechokwadi chekuti mwana wako akachengeteka.
Iyo kamera iri patafura inotora mifananidzo. Iyo tekinoroji ichashandisa sikirini yeterevhizheni kuona zviri kuitika panguva yebvunzo.
Kana tekinoroji ari kuita X-rays, mwana wako anofanira kunge akanyarara sezvinobvira kuti awane mhedzisiro yakanaka. Iwe unogona kubata maoko emwana wako zvishoma kusvika pachipfuva chako kuitira kuti ugone kuvhiringidza mwana mune chero nzira. Somuenzaniso, unogona kuimba nhetembo kana rwiyo.
Iyo X-ray technologist ichatanga bvunzo nekubvisa nzvimbo dzakavanda dzemwana wako uye kuisa chubhu. Iyo catheter inoburitsa dundira yega.
Iyo catheter inobva yabatanidzwa mubhodhoro rine musiyano wepakati. Musiyano uyu uchayerera nemuchubhu yepakati kupinda mudundira. Izvi zvinobvumira tekinoroji kuona zviri nani mukati medundira uye urethra. Mwana wako achakwanisa kunzwa musiyano sezvaanopfuura nepadundira. Inogona kunzwa kutonhora asi hairwadzi.
Iyo X-ray tekinoroji ichatora mamwe maX-rays apo musiyano wepakati uchiyerera mukati medundira. Kana dundira remwana wako razara, mwana wako anokumbirwa kuita weti mupani yemubhedha kana manapukeni. Iyo catheter ichabuda nyore nyore kana mwana wako achinge aita weti. Iyo tekinoroji ichatora mamwe maX-rays apo mwana wako ari kuita weti. Iyi ndiyo mifananidzo yakakosha yebvunzo.
X-ray technologists ichakuudza nzira yekuenda nayo muimba yekuchinja kuitira kuti mwana apfeke zvipfeko zvake. Ipapo unogara muimba yokumirira. Mushure mekutarisa mifananidzo yeX-ray, tekinoroji ichakuudza iwe paunogona kuenda.
Kana muine nguva yekusangana kukiriniki kuti muone chiremba mushure mekuongororwa, taurirai technologist. Vachaona kuti zvawawana zvatumirwa kukiriniki. Kana ukasaona chiremba mushure mekuongororwa, zvabuda zvichatumirwa kuna chiremba wemwana wako mukati mevhiki.
Ipa mwana wako zvinwiwa zvakawanda kumba
Imwe nguva mushure mekuedzwa, mwana wako anganzwa kusagadzikana, zvakadai sekunzwa kupisa paunenge uchiita weti. Ipa mwana wako zvinwiwa zvakawanda zvekunwa pazuva rinotevera kana maviri, semvura kana muto weapuro. Kunwa doro kuchabatsira mwana wako kana aine dambudziko.
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve mhedzisiro yeQuoteTest, ndapota tarisa neTechnologist. Kana mwana wako asina kugadzikana kweanopfuura maawa makumi maviri nemana, fonera chiremba wemhuri yako.
(VCUG) bvunzo dzinoshandisa x-ray kuona zvinoitika kana mwana wako aita weti.
Panguva yekuongororwa, mwana anenge achiiswa murethra.
Muedzo unogona kurwadza. Iwe unogona kuita kuti mwana wako azorore zvakanyanya sezvinobvira kumba kusati kwaedzwa, zvakadai semitambo yekuzorora. Unogona kubata Noor Hutano Hupenyu kuburikidza neemail uye WhatsApp kune mimwe mibvunzo nemhinduro. noormedlife@gmail.com